Faafaahin:- Al Shabaab Oo Sheegtay Qarax Ka Dhacay Muqdisho – Hornafrik Media Network
Faafaahin:- Al Shabaab Oo Sheegtay Qarax Ka Dhacay Muqdisho
Waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan qarax ka dhacay saaka magaalada Muqdisho iyadoo qaraxaasina uu ahaa miino dhulka lagu aasay.
Qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo Boolis ah kuwaasoo marayay wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka warshadii hore ee Sigaarka iy Taraqa.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan ay ku dhinteen labo askari halka saddex kalana ay ku dhaawacmeen, hase yeeshee ciidamo Boolis ah ayaa howlgalo ka sameeyay goobaha ku dhowdhow halka uu qaraxu ka dhacay.
Kooxda Alshabaab ayaa sheegatay Masuuliyadda Qaraxaasi,
Weerarada loo adeegsada miinooyinka laga qarxiyo goobaha ka fog halka lagu aasay ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow. Ururka Alshabaab ayaa hore u sheegay inay xeelado cusub kula dagaalamayaan ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM.
Labo habeen kahor ayay ahayd markii gaari marayay duleedka magaalada Muqdisho lagu weeraray miino dhulka lagu aasay iyadoo qaraxaas iyo rasaas ay rideen ciidamo ku sugnaa meel aan ka fogeyn ay ku dhinteen illaa afar askari oo saarnaa gaariga ay miinada la qaraxday.
Saldhiga Ruushka Ee Suuriya Oo Weerar Loo Geestay
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inay kordheen tirada Al-Shabaab ka jooga buuraha Gal-gala